Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo heshiis la gashay Bangiga Hormarinta Afrika – Radio Muqdisho
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo heshiis la gashay Bangiga Hormarinta Afrika
Wasiir kuxigeenka wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta mudane Jamaal Xasan Ismaaciil oo ay wehelinayaan Agaasimaha Guud ee wasaaradda Mudane Axmed Xaaji Cabdi iyo saraakiil ka kala socda Wasaaradda Maaliyadda iyo Xafiiska Ra’isul Wasaaraha ayaa magaalada Nairobi heshiis kula saxiixdey bangiga Hormarinta Afrika.
Heshiiskan ay wasaaraddu la gashay Bangiga hormarinta Afrika ayaa kusaabsan sidii ay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiintu kor ugu qaadi lahayd awooddeeda farsamo isla markaana u hormarin laheyd adeegga Isgaarsiint guud ahaan dalka oo dhan.
Heshiiskan oo uu dhanka wasaaradda u saxiixay Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Mudane Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa ku kacaya adduun dhan $139 Milyan oo ah caawimaad uu bangiga hormarinta Afrika ku tala jiro in lagu caawiyo dawladda Soomaaliya sidii ay isku filaansho uga gaari lahayd dhanka isgaarsiinta.
Madaxa Hormarinta Isgaarsiinta ee bangiga Hormarinta Afrika Mr. Nicholos Williams oo u saxiixay heshiiska dhanka Bangiga ayaa sheegey inuu ku faraxsan yahay iney dawladda Soomaaliya ka caawiyaan hormarinta dhanka Isgaarsiinta waxuuna sheegey in kaalmadan ay qayb ka tahay mashaariicda uu bangigu ugu tala galay waddamada Afrika gaar ahaan kuwa ksoo kabanaya dhibaatooyinka.
Heshiiskan dhexmaray wasaaradda iyo Bangiga Hormarinta Afrika ayaa xoogga saari doona sidii ay wasaaraddu u heli lahayd qalab casri ah oo ay wasaaraddu ku maamusho kulana socoto Isgaarsiinta dalka, Kobcinta awoodda wasaradda, dhisitaanka hay’adda Isgaarsiinta iyo gaarsiinta adeegga Internet-ka dhamaan dawlad goboleedyada dalka.
Sanadka 2016 ayay wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiintu ku tala jirtaa iney ku talaabsato qorshe balaaran oo waxbadan kusoo kordhin doona Isgaarsiinta dalka iyadoo xeerkii Isgaarsiintuna horyaallo baarlamaanka laguna wado in la meelmariyo si ay wasaaraddu u gaarto himilooyinkeeda .
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo wadda dadaallo badan ayaa 13-ka Bishan December shir ugu yeertay dhamaan shirkadaha Isgaarsiinta si ay ugu gudbiso qorshaha wasaaradda ee sanadka 2016.
Kulanka xildhibaandda Baarlamaanka ee Maanta oo looga hadlayo Miisaaniyada 2016
Dhageyso Warka Subax e Raadiyo Muqdisho